Junction~8 (Maw Tin) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » Junction~8 (Maw Tin)
Junction~8 (Maw Tin)
Posted by mG on Sep 21, 2010 in News |5comments
2010 Food TV
ကျွန်တော် အခုတင်ပြထားတဲ့ NEWS လေးကတော့စာဖတ်သူတွေဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားမလည်းဆိုတာလေးကိုသိချင်လို့ အကျဉ်းချုပ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါ့မယ်….။အကယ်လို့များ စိတ်ပါဝင်စား သိချင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့တင်ပြပေးပါမယ်။…….
Junction~8 (Maw Tin) Shopping Center ကြီးကိုမော်တင်လမ်းမကြီးနှင့်အနော်ရထာလမ်းထောင့်၊လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့
တွင်တည်ရှိပါသည်။အဲ့ဒီ Shopping Center ကြီးကိုအပြင်ပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ခန့်ညားထည်ဝါတဲ့ အဆောက်အဦး အပြာရောင်ကိုတွေ့
ရမှာပါ။ဈေးဝယ် Shopping Mall အတွက်အထပ်ပေါင်း (၃ ထပ်)နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုတွေ့ရှိရမှာပါ။လူနေအိမ်အထပ်အပိုအနေနဲ့ ၁၂ထပ်ပါရှိတယ်ဆိုသိရှိရပါတယ်။မြေအောက်ထပ်တွင် Junction~8 Shopping Mall သို့ဈေးဝယ်ရောက်လာသော ကားများရပ်နားနိုင်ရန်အတွက်နဲ့ ယခင်လမ်းဘေးဈေးသည်များအား Under Grown ထဲတွင်စနစ်တကျရောင်းချနိုင်ရန်အတွက်ဈေးရောင်းရန်
နေရာအဖြစ် သတ်မှတ်နေရာချပေးထားတာကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာပါ။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်လည်း ကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းများဖြစ်မြောက်လာအောင် Junction~8 Shopping Mall ရဲ့လမ်းဆုံပွိုင့်ထိပ်တွင် Digital TV ဖြင့်ကြော်ငှာများအား
လက်ခံသောဝန်ဆောင်မှုများပေးနေတာကိုလည်းသွားရောက်လည်ပတ်သူများ အဖို့တွေ့ရှိရမှာပါ။အတွင်းပိုင်း မြေညီထပ်တွင် စီးပွားဖြစ်ဆိုင်ခန်းပေါင်း (၁၈ ခန်း) နှင့်အခြားသောအခပေး ယာယီဆိုင်ခန်းများကိုလည်း တွေ့ရှိရမှာပါ။City Mark ကိုထူးခြားစွာနဲ့မြေအောက်ထပ်မှာပါတွဲဖွင့်ထားကိုလည်း တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပြီ Beauty & U ဟုအမည်ပေးထားတာသော City Mark ၏ အလှကုန်အရောင်းကောင်တာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါမည်…….။ရန်ကုန်မှာတော့ City Mark ရဲ့ကြီးမားတဲ့ အလှကုန်ပြင်စဉ်ရောင်းချမှုကိုတော့
Junction~8 Shopping Mall မှာတင်တာတွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်…..။City Mark နှင့်အတူတူတွဲဖွင့်လေ့ရှိသော Season Coffee ဆိုင်ကိုအလှကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချသောဘေးတွင် အမြင်စမ်းလေးများနှင့်ပြင်စဉ်ထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Center ရဲ့အလယ်(Main) မှာတော့ NEO Coffee Circles ကလည်း Shopping Mall ရဲ့အလှကိုဝင့်ကြွားလာအောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။(ညအိပ်မီးအိမ်လေးများ၊မီးပုံးလေးများ၊ စတာလေးတွေနဲ့ Romance ဆန်ဆန်လေးပေါ့)
ပထမထပ် – ဒီအထပ်မှာတော့ ဆိုင်ခန်းပေါင်း(၃၂ ခန်း)ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ ဒီပထမအထပ်ကို လူ့အသုံးအဆောင်တွေထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။။GIORDANO & BSX ရဲ့ SAVE 3000 Ks အစီစဉ်ကို 30th , September ,2010. အထိ Promotion ပေးထားတာကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယထပ် – ဆိုင်ခန်းတွေကတော့ ပထမထပ်လောက်တော့ မများတော့ဘူးဗျ။အဲ့ဒီ ဒုတိယထပ်မှာကတော့ အခန်းကျယ်ကျယ်နဲ့နေရာမှာ အေးအေးဆေးဆေးရောင်းချင်သူတွေ အတွက်ပေါ့။ဆိုင်ခန်းအားလုံးနီးပါးကတော့ Mall အားလုံးထဲမှာ ဒုတိယထပ် မှာတည်ရှိနေသော ဆိုင်ခန်းတွေက ကျယ်တယ်လို့ (ဈေးလာဝယ်သူ – ဒေါ်တင်အေးလွင်) ရဲ့သုံးသပ်ချက်ကိုသိ၇ှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီအထပ်မှာလည်း အဓိကရောင်းချတာကတော့ လူ့ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေပါ။ (အဲယားကွန်း၊အ၀တ်လျှော်စက်၊လျှပ်စစ်အနှိပ်ထိုင်ခုံ…)နာမည်ကြီး Company တွေရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ LG , SAMSUNG , KO KO Beauty Saloon……etc,.အဲ့ဒီ ဒုတိယအထပ်မှာပဲ (ရွှေကောင်း ဟော့ပေါ့)ဆိုင်ကို လမ်းမတော်မြို့နယ်ရဲ့ အလှကို ကြည့်ရင်းနဲ့စားလို့ရအောင် Mall ရဲ့ဘယ်ဘက်ထောင့် Projector ရှိတဲ့ဘက်မှာဖွင့်ထားပါတယ်
ထူးခြားတဲ့ အထူးအစီစဉ်အနေနဲ့ LG နဲ့ SONY Electronic Center တို့ရဲ့ မဖြစ်နိုင်တောဈေးနှုန်းများ နှင့် ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။
တတိယထပ် – လူတိုင်းအတွက် အရေးပါအရာရောက်တဲ့နေရာလေးလို့ပြောရမှာပါ။အဲ့နေရာလေးကတော့ ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။အစားအသောက်တွေနဲ့ကလေးကစားကွင်းရယ်၊ရုပ်ရှင်ရုံရယ် ပါဝင်ပါတယ်။လူအများဆုံး အထပ်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်တွေကတော့ KeCo (B.B.Q) , ပန်းစွယ်တော် (Thai Express) , IcFc (Fast Food) , MOON BAKERY , Ice-Cream Bar , Happy (Cafe & Noodel) , Bitter Sweet (Coffee Shop) , i-Planet (Play Ground) , Cinemar .
တို့ကိုတွေရပါတယ်။ဆိုင်တိုင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လက်ရာများကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ။တကယ့်ကို ဆွေမျိုးမေ့လောက်ပါတယ်။ Play Ground မှာလည်း ကလေးကစားကွင်းနှင့်Electronice ဂိမ်းများ၊လှောင်းကစားများ ပါဝင်ပါတယ်။Coin စေ့လေးတွေရဲ့ တန်ဖိုးကတော့ 100 ကျပ် လို့သိရှိရပါတယ်။
ကလေးမိဘတဦးပြောကြားချက်ကတော့ – ကစားတဲ့နေရာမှာတော့ လေရပြီး။အတွင်ပိုင်း လျှပ်စစ်ပစ္စည်များနဲ့ခေတ်မှီစက်တွေဘက်မှာတော့ လေအလုံမရလို့ လူချွေးနံ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်ရှုရတာလည်း အခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ရုံမှာတော့ စတင်ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်မှစကာ လက်မှတ်များရောင်းမလောက်ဖြစ်နေရပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရုံ၏ ထူးခြားချက်မှာ ကြိုတင်မှာယူခြင်း အားလုံးဝလက်မခံပါ။ကိုယ်တိုင် လာရောက်ဝယ်ယူမှတာ လက်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိကြည့်လိုသော ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ကိုလည်း Finger Pointer System နဲ့ကိုယ်တိုင်ကွန်ပျူတာဖြင့် နေရာရွေးပြီး လက်ကလေးနဲ့ထိလိုက်ရင်ဝယ်လို့ရပါတယ်။လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ (1500 ကျပ် မှစကာ 6500 ကျပ် )ထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ 6500 ကျပ်ကတော့ စုံတွဲခုံလေးပါ။ရုံက နှစ်ရုံရှိတယ်။တချိန်ထဲမှာပဲ။ရုံရှင် နှစ်မျိုးပြတာပါ။အခုလောလောဆယ်တော့ နှစ်ရုံလုံးမှာတကားပဲပြထားပါတယ်။
တတိယထပ်မှာကတော့ ပျော်ဖို့အလွန်ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ လုံခြုံရေးအော်ပရေတာမှာ သီချင်းများမဖွင့်နိုင်ပဲ အကြောင်းကြားချင်းများကို အဆက်မပျက်တင်ပြနေရပါတယ်။ကျွန်တော် Mall ထဲကိုရောက်ထဲက ထူးထူခြားခြားကြားနေရတာကတော့ ကလေးတွေလမ်းပျောက်သွားကျတာ၊ကလေးကိုဘယ်မှာထားခဲ့မိလည်းမသိတာ၊လုံခြုံရေးအလုံအလောက် မရှိလို့ဘယ်သူ့ကိုမေးလို့ မေးရမယ်မှန်းမသိဖြစ်နေတာတွေကတော့ Junction~8 Shopping Mall ကိုသရုပ်ပျက်စေပါတယ်။
Junction~8 Shopping Mall ရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့အချက်တွေနဲ့အားနည်းချက်ကိုတော့ တဖြေးဖြေးနဲ့ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပါ့မယ်လို့ (တာဝန်ရှိသူတဦးမှပြောကြားပါတယ်)
ယနေ့ကျွန်တော် စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လုံခြုံးရေးတွေ များလာတယ်။စနစ်တွေသိသိတာတာပြောင်းလာတယ်။လူကျတ်တာတွေက အစထိန်းလာနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအသေးစိတ်ထပ်သိချင်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း ဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။……အားလုံးကိုခင်မင်လေးစားချက်ပါ……..။
လက်မှတ်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ (15000 ကျပ် မှစကာ 6500 ကျပ် )ထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ မှားနေလို့ပါဗျာ………..။ လက်မှတ်ဈေးနှုန်းက 1500 ကနေစတာပါ။ 15000 မဟုတ်ပါဘူးဗျာ……။
လက်မှတ် ဈေးနှုန်းကတော့ ကြောက်စရာပဲ နော်… သားတို့ တော့ မတတ်နိုင်ပါဝူး… 6500 တန်းကို ပြောပါတယ်… ဟီးဟီး…
စာဖတ်ပရိတ်သတ်များခင်ဗျာ။ကျွန်ုပ်၏ သတင်းများရေးသားရာတွင် စာလုံးအမှားနှင့်လိုအပ်ချက်များအား နားလည်ပေးစေလိုပါသည်။အွန်နက်ရှင်၏ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် အစဉ်မပြေမှုကို နားလည်ပေးစေချင်ပါသည်။ လေးစားစွားဖြင့် (mG)
အဲကွန်း က မအေးဘူးလား . . . မကောင်းဘူးလားဟင် . . .